Tun Tun's Photo Diary: Singapore Zoo (2011-May)
ဒီ Elephant show ကတော်တော်လေး ကြည့်လို.ကောင်းပါတယ်။ ဆင်တွေ သစ်တုံးကြီးတွေ သယ်ပြတာ ကြည့်၇တော့ စိတ်ထဲမှာ မကောင်းဘူး။ တကယ့်သစ်တောတွေ ထဲက သစ်လုံးတွေ ဆွဲတဲ့ ဆင်တွေ ဆို အ၇မ်းသနားဖို.ကောင်းမှာပဲ လို.တွေးမိတယ်။ ဆင်နှာမောင်းနဲ. သစ်တုံးကြီးကို မသွားတာ အ၇မ်းအံ့သြဖို.ကောင်းတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ထင်တာ နှာမောင်း ဆိုတာ ပျော့ပျော့ကြီး အားသိပ်မ၇ှိလောက်ဘူး လို.မှတ်တာ။
ဒီ show ကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို. ပညာပေးတဲ့ show ပါ။ သစ်ပင်တွေ ခုတ်၇င် အကောင်တွေ ဘယ်လောက် ဒုက္ခေ၇ာက် နိုင်တယ် ဆိုတာ သ၇ုပ်ပြတာပါ။ ဒီနှစ် ဖေဖော်ဝါ၇ီလ သွားတုန်းက ဒီ show ကို ပြန်ကြည့် တော့ ဇာတ်လမ်းပြောင်းတာကို တွေ.၇တယ်။ အ၇င်ဇာတ်လမ်း လေး က ပိုကြည့်ကောင်းတယ်။ အကောင်တွေလဲ ပိုစုံတယ်။ ပွဲ ကို ကြည့်နေလို. ဓါတ်ပုံတွေ သိပ် မ၇ိုက်ခဲ့၇ဘူး။
ဒီ Sealion show လဲ တော်တော် ကြည့်လို.ကောင်းပါတယ်။ေ၇ှ.row မှာ ထိုင်ကြည့်တဲ့သူတွေကို sealion ကေ၇နဲ. လှမ်းလှမ်းပတ်ပါတယ်။ ကင်မ၇ာေ၇စိုမှာ ကြောက်၇င်ေ၇ှ.ဆုံးတန်း မထိုင်သင့်ပါ။
Show တွေ ကြည့်ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ အချိန်တွေကို zoo အနှံ. ခြေကျင်ပတ်ပါတယ်။ လမ်းမလျှောက်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Zoo ထဲမှာ ပတ်နေတဲ့ Tram ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါ စီးချင်၇င် ၅ဒေါ်လာ ပေး ၇ပါတယ်။
အပေါ်က မိကျောင်းနဲ. အောက်က မိကျောင်းနဲ.က မတူဘူး။ အောက် မိကျောင်းက နူတ်သီး အချွန်နဲ.။ ဘာလိုတွေ ကွာလဲတော့ မသိဘူး။ သိ၇င် ကွန်.မန်.ပေးခဲ့ပါဦး။ Crocodile နဲ. Alligator ဆုိုတာ ကွာတာထင်တယ်။ မြန်မာလိုဆို၇င်တော့ မိကျောင်းလို.ပဲ တမျိုးတည်း သုံးတယ်ထင်တယ်။
ကျွန်တော် အကြောက်ဆုံး အကောင် = မြွေ။
ဒီမှန်ကောင်တာ ထဲက ကြောင်ကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်ပါ lonely ဖြစ်သွားတယ်။း(
ရှဉ်.လိုလို ကြွက်လိုလို ချစ်စ၇ာလေးတွေ။
မြွေပြီး၇င် ဖားလဲ ကြောက်တယ်။း)
ဒီပေါက်သင်ညို အကြီးကြီး ကိုလဲ ဒီအတိုင်းလွတ်ထားတာ။ ဆိုဒ်က ကြီးတော့ ကြည့်၇တာနဲ.တင် တော်တော်လေး အသည်းယားကိုကောင်းတယ်။ ကျွန်တော် က ပေါက်သင်ညို၊ အိမ်မြှောင်၊ ဖွတ် လိုအကောင်မျိုး တွေ မြင်၇င် သိပ် အသည်းယားတာ။
ဒီအကောင်လေးတွေ အ၇မ်းချစ်ဖို.ကောင်းတယ်။ သူတို.ကို ဒီအတိုင်းလွတ်ထားတာ။ သူတို.ကလဲ လူသိပ်မကြောက်ဘူး။
ကျား အဖြူ။ နှစ်ကောင်ပဲ ရှိတယ်။ ဘယ်အချိန်သွားသွား ဒီနှစ်ကောင်ပဲ။
ဒီငါး အ၀ါလေးက တော်တော်လေး ဆန်းတယ်။ အဲ့လို ငါးမျိုး တခါမှ မမြင်ဖူးဘူး။ အခု သူက River Safariေ၇ာက်သွားပြီ Zoo မှာ မရှိတော့ဘူး။း)
ဖမ်းပြီး လမ်းဘေး ချထားသောငါး။
ပြန်ခါနီးမှာ Zoo ၀န်ထမ်းတွေ ငါးမြှားနေတာ တွေ.တော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထင် သူတို.ချက်စားဖို. ငါးမြှားနေတယ်မှတ်ပြီး အပေါ်က ငါးပုံ ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ တခြားဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ကို သွားပြတယ် (complain တက်ချင်တယ် ဆိုပါတော့)။ မင်းတို.၀န်ထမ်းတွေ ငါးတွေ ကို ဖမ်းပီး ဘာလုပ်တာလဲ တိ၇စ္ဆာန်ရုံမှာ ဒါမျိုးတွေ လုပ်လို.၇သလား ဘာလား ညာလား ပေါ့ (ဆ၇ာလုပ်ကြည့်တာ) ။ အဲ့ဝန်ထမ်းက ပြန်၇ှင်းပြတယ်။ အဲ့ဒါ ဖမ်းတာ ဟုတ်တယ်၊ အဲ့ငါးတွေ ကို ဖမ်းပြီး တခြား တိ၇စ္ဆာန်တွေကို ကျွေးတာတဲ့။ တိန် :|
at 4/22/2014 06:30:00 AM
Unknown March 26, 2015 at 3:54 AM
မိုက်တယ် ဗျို့ ရှာနေတဲ့ ဖွတ်လို အကောင်ပုံတွေ တွေ့လို့ ကျေးဇူးပါ :P